WARBIXIN: Lukaku, Walker, Lacazette & 10ka Ciyaaryahan Ee Ugu Qaalisan Ilaa Iyo Haatan Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda. – WWW.Gool24.net
WARBIXIN: Lukaku, Walker, Lacazette & 10ka Ciyaaryahan Ee Ugu Qaalisan Ilaa Iyo Haatan Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda.
Suuqa kala iibsiga ee xagaagan ayaa mid aad u xiiso badan, iyadoo kooxaha waa weyn ee Yurub ay iibsanayaan xiddigo tayo leh oo dunida laga yaqaano si ay isku xoojiyaan ka hor xilli ciyaareedka cusub.
Jariirada Sport ee ka soo baxda dalka Spain ayaana qortay 10kii saxiix ee ugu qaalisanaa ilaa iyo haatan
1. ROMELU LUKAKU (75 milyan ginni)
Ka dib afar xilli ciyaareed uu joogay Everton oo mid ka mid ah ay aheyd amaah uu ugaga soo maqnaa Chelsea, weeraryahanka reer Belgium ayaa isaga dhaqaaqay kooxda Merseyside ka dhisan. Waxa uu dhaliyay 68 gool 141 kulan uu saftay horyaalka, waxaana uu ugu danbeyn u dhaqaaqay kooxda Jose Mourinho ee Man United oo ah isla tababarihii ka fasaxay Stamford Bridge.
2. KYLE WALKER (54 milyan ginni)
Waxa uu bartilmaameed weyn u ahaa tababaraha Manchester City Pep Guardiola kaasoo lacag rikoor ah ka bixiyay daafaca markii uu kala soo wareegayay Tottenham.
3. ALEXANDRE LACAZETTE (52 milyan ginni)
Waxa uu horyaalka Faransiiska ka dhaliyay 100 gool, Lacazette waxa uu Arsenal kaga soo biiray kooxda Lyon, waxa uu booska weerarka kula tartami doonaa Olivier Giroud.
4. BERNARDO SILVA (43 milyan ginni)
Ka dib seddex xilli ciyaareed uu joogay Monaco waxa uu noqday mid ka mid ah kubad sameeyayaasha ugu xiisaha badan Yurub. Isagoo jira da’da 22 sanno waxa uu aqbalay inuu ka tago Ligue 1 oo uu ku biiro Man City.
5. TIEMOUE BAKAYOKO (40 milyan ginni)
Kooxda Chelsea ayaa xagaagan oo dhan ceyrsaneysa xiddigii khadka dhexe ee Monaco Bakayoko iyagoo ugu danbeyn ku guuleystay inay shalayto soo xerogeliyaan, waana ciyaaryahan cashar ka soo qaatay xiddigii hore ee Chelsea Makalele
6. LEONARDO BONUCCI (36.7 milyan ginni)
Isbuuc ka hor cidna kuma fekereynin inuu ka tagi doono Juventyus. Lix horyaal uu la qaaday todobo xilli ciyaareed waxa uu ahaa xubin muhim u ah daafaca Bianconeri. Si kastaba, qilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo Allegri ayaa keentay inuu waayihiisa ciyaareed ka sii wato AC Milan.
7. MOHAMED SALAH (36.7 milyan ginni)
Liverpool ayaa ka soo iibsatay xiddiga reer Masar kooxda Roma. Salah ayaa dhaliyay 29 gool 65 kulan uu saftay labadii xilli ciyaareed ee u danbeysay.
8. CORENTIN TOLISSO (36.35 milyan ginni)
Markii uu ciyaaraha ka fariistay Xabi Alonso waxa ay keentay in tababare Carlo Ancelotti uu u dhaqaaqi inuu ku bedelo da’ yarka kooxda Lyon. 22 jirkaan ayaa afar xilli ciyaareed ka dheelay horyaalka Faransiiska.
9. EDERSON (35 milyan ginni)
Waxa uu ahaa goolhaye uu si weyn u doonayay tababare Pep Guardiola. Markii Guardiola uu tagay City waxa uu ceyriyay Joe Hart waxaana uu ku bedelay Claudio Bravo. Si kastaba qorshahaas ma noqon mid lagu najaxay waxaana uu haatan Benfica ka keensaday Ederson.
10- ANTONIO RUDIGER – (34 milyan ginni)
Daafaca dhexe ee Jarmalka waxaa si weyn u doonayay tababaraha Talyaaniga Antonio Conte waxaana uu ka soo wareegay kooxda Roma isagoo yimid kooxda Chelsea ee horyaalka Premier League difaacaneysa.